Naiditra am-ponja ilay komandà teny amin'ny primatiora - Ao raha du 6 mars 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Kidnapping à Madagascar Naiditra am-ponja ilay komandà teny amin’ny primatiora – Ao raha du 6...
Natolotra ny Fitsarana, omaly, ilay manamboninahitra kaomandà niasa teny amin’ ny Primatiora. Nilatsaka ny didim-pitsarana nampidirana am-ponja vonjimaika azy eny Antanimora taorian’izay.
Fikambanan-jiolahy sy fanaovana kolikoly ny vesatra niampangana azy. Noho ny fitarainan’ny mponina tany Tsaratanàna nandritra ny fotoana nahatongavan’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, tany an-toerana, no nivoahan’ ny anaran’io kaomandà io izay voalaza fa mpiray tsikombakomba amin’ireo jiolahy.
Efa lehiben’ny Zandari- maria, kaomandin’ny kaompanian’ny Tsaratanàna teo aloha ity manamboninahitra voampanga ity. Taona vitsy lasa izay dia voatonona tamin’ ny raharaha fikambanan-jiolahy teto an-drenivohitra ihany koa ny anarany saingy voalaza fa tsy nisy tohiny ny famotorana taty aoriana. Nivoaka indray anefa ny anarany notononin’ireo mponina tany Tsaratanàna. Avy hatrany nisy ny baiko mampisambotra azy tamin’ ny talata 26 febroary lasa teo.
Manohy ny antso hatrany amin’ireo zandary rehetra manerana ny Nosy mba hanao ny asany manaraka ny lalàna, indrindra amin’ ny fanajana ny zon’ olombelona, ireo lehiben’ ny Zandarimaria. Ankoatra izay, dia « miantso ny rehetra izahay mba hifanampy hanome vaovao raha mahatsikaritra tranga hafahafa fa ho arovana ny momba azy. Afaka tonga mivantana eny amin’ny Sekretariam-panjakana miadidy ny Zandarimaria eny Betongolo izay manam­ baovao na handefa izany amin’ny pejy « Facebook doléances gendarmerie », hoy ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, kaomandin’ny zandarimaria.
Article précédentBois de Rose – Le général RAVALOMANANA risposte – Expressmada du 5 mars 2019
Article suivantBarons du HVM en prison – Parité homme-femme – La gazette DGI du 6 mars 2019